Shiinaha TS-005A-25 Nooca LCD nooca ugu dambeeya ee foostada timo-jarka ah oo qaabeeya curling iron wand tungs curling warshad iyo soo-saare | Keshida
TS-005A-25 Nooca LCD nooca ugu dambeeyay ee foostada timaha foorarinta ah ee saxalo birqaya
Lambarka Tusaalaha TS-005A-25 nooca LCD Xadhigga korontada 1.95m, 0.5mm²
Cabbirka alaabta: 33.5 × 6.5x5cm Function
Shaqada leexinta timaha
Danab 100-240V, 50/60Hz Heerkulka ugu sarreeya
Awooda Ugu Badan 60W Dhexroorka tuubada
Tuubada aluminiumka dahaarka leh ee dhoobada ah
30s dhakhso u kululee
Badeecad la xaqiijiyay Haa Xadhigga wareegga 360 digrii
Bandhigga heerkulka LCD & xakamaynta Haa Codsiga
Gudaha, safarka, hoteelka
Iyada oo dabool leh qaab dabool leh oo daboolka tuubada ah Haa Midab Cadaan/Champagne/la habeeyay
Badeecad la xaqiijiyay Haa Dheeman kale oo la heli karo 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 30mm, 32mm
Goobta asalka Ningbo, Shiinaha MOQ
Kormeer dhow ayaa loo baahan yahay marka ay isticmaalaan dadka qaba dhaawacyada ama naafada ah.
1. Ha isticmaalin qalabyada ama qaybaha ay soo saarayaasha kale soo saaraan.
2. Si looga fogaado khataraha halista ah, xadhigga korontada oo waxyeelloobay waa in lagu beddelaa xirfadlayaal ka socda soo -saaraha ama waaxda dayactirkiisa ama iyada xarumo dayactir oo maxalli ah oo loogu talagalay. Fadlan ha daboolin xadhigga korontada agagaarka jirka ugu weyn ee alaabta.
3. Fadlan ku rid sheyga dusha sare ee u adkaysta marka uu weli aad u kulul yahay. Weligaa ha saarin wax dabool ah sida tuwaal ama dhar sheyga marka uu kulul yahay ama ku jiro xaalad shaqo
3. Ka fogow xiriir toos ah oo u dhexeeya dusha sare ee heerkulka sare ee alaabta iyo maqaarkaaga.
4. Iyadoo la tixgelinayo ilaalin wanaagsan, waxaa lagu talinayaa in aaladda ilaalinta hadda jirta ee hadhay (RCD) oo leh hawsha hadhay ee la qiimeeyay
hadda ka hooseeya 30mA waxaa lagu daraa nidaamka wareegga korantada kaas oo awood u leh musqusha. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan RCD, fadlan la xiriir deegaankaBixiyeyaasha adeegga rakibaadda RCD.
Marka alaabtan la rabo in la tuuro, fadlan ha ku dhex darin qashinka maalinlaha ah. Si aad u ilaaliso bay'adeena, fadlan ku wareeji adawladdu waxay u qoondeysay xarunta dib -u -warshadaynta deegaanka.
Qodobbada fiiro gaar ah u leh isticmaalka nabdoon
1. Ku xir korontada dhaxe.
2. Riix dheer 2 ilbidhiqsi oo ku yaal furaha furaha, badeecadu waxay bilaabmaysaa inay kululaato.
3. Riix gaaban oo furaha kororka ama dhimista ayaa kuu sahli doona inaad hagaajiso heerkulka heerkulka nooca timaha shaashadda shaashadda LCD -ku waxay ku siinaysaa dareen toos ah oo ku saabsan xaaladda shaqada ee aaladda inta la isticmaalayo.
4. Badeecadani waxay leedahay shaqada hagaajinta heerkulka, heerkulkeeda waxaa lagu hagaajin karaa inta u dhexeysa 100 ° C-200 ° C.
5.Ku xidh riix dheer riix furaha furaha 2 ilbidhiqsi.Waxaad ka furtaa barta korontada ee AC, sug inta ay qaboojinteeda dhammaystiran tahay kaydinta.
Heerkulka kala duwan wuxuu saamayn kala duwan ku yeelan doonaa nooc kasta oo timo ah
saamaynta la rabay ka hor intaadan go'aan ka gaarin dejinta heerkulka habboon iyo waqtiga hawlgalka.
7.Waxay badeecadani tahay mid shaqsi ahaan loo isticmaalo gudaha, iska ilaali inaad ka dhex adeegsato dad kala duwan ama adeegsada xirfadleyaal ku jira saloon ama dukaanka tima -jare.
8. Si loo keydiyo tamarta loona wanaajiyo hufnaanta, badeecaddu waxay si otomaatig ah u geli doontaa qaabkeeda hurdada ka dib markii 30 la jaanqaado waqtiga iyada oo aan la hawlgelin inta la isticmaalayo. Saxaafad gaagaaban oo fure kasta leh ayaa toosin doonta.
Duruufaha hoose waxay ku dambayn doonaan burinta dammaanadda
1. Dhibaatooyinka ay keenaan dayactir qaldan iyo nadiifin ama ku -guul -darreysiga raacitaanka tilmaamaha qalliinka iyo qodobbada taxaddarka la taxay halkan buug -gacmeedka.
2. Waxyeellada aadamigu sameeyo inta lagu jiro hawlgalka qaybaha, codsiga ujeedooyin kale, iwm.)
3. Waxyeelada uu sababay Majeure Force.
Hore: NZ-616 2-in-1 Xirfadlaha Dib-u-Kordhinta Timaha Xarkaha leh
Xiga: NZ-908 Mini Qaboojiyaha Timaha
Mashiinka Mashiinka Timaha Toosinta ah
Timaha Toosiye leh Curler
Timaha Toosiyeyaasha Curler
TS-005-25 timaha birta lagu duubo
TS-8000 Timaha daboolida timaha usha qalooca leh haysa ...
TS-005A-25 bandhigay LED heerkulka sare iyo hooseeyo ...
2021 Lanches New Style Style Stylers Dharka timaha ...